Isingeniso nokusetshenziswa komshini we-roller conveyor pass hlobo wadubula umshini wokuqhuma | I-Ding Tai
Isingeniso nokusetshenziswa komshini we-roller conveyor pass hlobo wadubula umshini wokuqhuma
Isingeniso nokusetshenziswa komshini we-roller pass shot blasting Machine
Umshini wokuqhuma kwe-Shot luhlobo lobuchwepheshe bokwelashwa ukuqothula isihlabathi sensimbi nokudutshulwa kwensimbi ebusweni bezinto ezibonakalayo ngesivinini esikhulu ngomshini wokuqhumisa ngokudubula. Uma kuqhathaniswa nobunye ubuchwepheshe bokwelashwa komhlaba, buyashesha, busebenze kangcono, futhi bungagcina noma bukhonkotha inqubo yokuphonsa.
Izinkampani zaseMelika zenza umshini wokuqala wokuqhuma wokudubula emhlabeni ngawo-1930s. Ukukhiqizwa kweChina kwemishini yokuqhuma kwezibhamu kwaqala ngawo-1950s, ikakhulukazi ukukopisha ubuchwepheshe beSoviet Union yangaphambili.
Imishini yokuqhumisa i-Shot nayo futhi isetshenziselwa ukususa izimbumbulu, isikali nokugqwala okungathinta ubuqotho, ukubukeka, noma ukucaciswa kwezingxenye zento. Umshini wokuqhuma kokudubula ungasusa nezinto ezingcolisayo endaweni ehlanganisiwe futhi unikeze iphrofayili engaphezulu ekhulisa ukunamathela kweleveli ukuqinisa isengezo somsebenzi.
Umshini we-Roller pass wadubula umshini wokuqhuma
Umshini wokuqhuma kokudubula uhlukile kumshini wokuqhuma kokudubula ngoba usetshenziselwa ukunciphisa impilo yokukhathala kwengxenye ukwandisa izingcindezi ezihlukile zomhlaba, ukwandisa amandla engxenye, noma ukuvikela ukukhathazeka.
Okokusebenza kwe-Shot blasting kuqala kusetshenziswa embonini yokuphonsa ukususa isihlabathi esingaphezulu nesikhumba se-oxide yensimbi yensimbi nensimbi cast.
Cishe konke ukuphonswa kwensimbi, ukuphonswa okumpunga, izingcezu zensimbi ezingalimali, izingcezu zensimbi ebunjiwe nokunye kufanele kudutshulwe kuqhume. Lokhu akuyona kuphela ukususa isikhumba se-oxide nesihlabathi endaweni yokubeka, kepha futhi nenqubo ebalulekile yokulungiselela ngaphambi kokuhlola ikhwalithi yokuhlola. Isibonelo, ngaphambi kokuhlolwa okungonakalisi okonakele kwe-turbine casing enkulu, ukuhlanza ngokuqinile ukuqhuma kwesibhamu kufanele kwenziwe ukuze kuqinisekeke ukuthembeka kwemiphumela yokuhlola.
Emkhiqizweni wokuphonsa ngokujwayelekile, ukuhlanza ukuqhumisa inqubo yokuqothula inqubo ebalulekile yokuthola iziphambeko ezingaphezulu njengama-ports angaphansi, izimbobo ze-slag, isihlabathi, ukufakwa okubandayo, ukukhonkotha njalonjalo.
Ukuhlanza okungaphezulu kokuphonswa kwensimbi okungeyona eyisijobelelo, njenge-aluminium alloy ne-alloy alloy, ngaphezu kokukhipha isikhumba se-oxide nokuthola iziphambeko zokuphonsa, inhloso eyinhloko ukushaya isibhamu ukuze kususwe izimbotshana zokuphonswa komshini wokufa kanye nokuthola ikhwalithi ephezulu ngokubaluleka komhlobiso , ukuthola imiphumela ephelele. Ekukhiqizweni kwensimbi yensimbi kanye nensimbi, ukuqhuma noma ukuqothula inqubo okwenziwa ngomshini noma ngamakhemikhali wokususa isikhumba se-phosphorus ukuqinisekisa ukukhiqiza okuphezulu ekukhiqizeni okusansimbi.
Ekhiqizweni kweshidi lensimbi le-silicon, ishidi lensimbi engagqwali namanye amapuleti wensimbi kanye nemichilo, ukuphathwa ngokudutshulwa noma ukwelashwa kokukhipha kufanele kwenziwe ngemuva kokungeniswa kwinqubo yokubamba okubandayo ukuze kuqinisekiswe ubulukhuni bangaphezulu nobukhulu bokungena kwamapuleti wensimbi ebandayo.
Ngokwenkolelo yesimanje yensimbi, ukwandisa ukuxinana kwabantu ngaphakathi kwensimbi kuyisiqondisi esikhulu sokwenza ngcono insimbi.
Kufakazelwe ukuthi ukuqhuma kwezibhamu kuyindlela esebenzayo yokwandisa isakhiwo se-dislocation. Lokhu kubaluleke kakhulu kwezinye izingxenye zensimbi ezingenakenziwa lukhuni ngokuguqulwa kwesigaba (njengokuqina kwe-martensite) noma ezidinga ukuqiniswa okwengeziwe ngesisekelo sokuqina kwesigaba sokushintsha.
I-Aviation, imboni yezindiza, imoto, ugandaganda nezinye izingxenye zidinga ikhwalithi ekhanyayo, kepha izidingo zokuthembeka ziya ngokuya ziphakama, isilinganiso esibalulekile kwezobuchwepheshe ukusebenzisa ubuchwepheshe bokudubula ukuqeda amandla namandla okukhathala kwezakhi.
Isikhathi sokuthumela: Jul-18-2020
wadubula Umshini Wokupholisa, Shot Blasting Turbine, Umshini wokuqhuma kwe-Shot, ukudubula ukuqhuma kwezingxenye ze-Spare, Shot Blasting Wheel, H umshini wokudubula uqhuma, Yonke Imikhiqizo